Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-ekiri eserese na-atọ na-egosi na mgbe ahụ ị ga-abụ n'ezie n'anya Donald Duck na-akpa ọchị echiche na olu. Scruffy Duck na-a ise-esi anwụde ohere mpere game dabeere na ndị ezinụlọ katuunu ọbọgwụ. Ị nwere ike igwu a kacha mma ohere mpere bonus saịtị egwuregwu na ya 25 ofu paylines. The backdrop nke egwuregwu a na-esere ọdọ na Lotus okooko osisi na a frog na a akwukwo. The katuunu style music ke ndabere na-gị mgbe nile ọbịa. E nwere ụfọdụ n'ezie na-akpa ọchị na-agụ akụkọ dị ka egwuregwu na akara na tinye a fun mmewere na-esi anwụde. The ịkụ nzọ ịgba na egwuregwu a na-setịpụrụ na a kacha nta nke 25p na max bụ £ 250 kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Scruffy Duck
Nke a magburu onwe katuunu style na ị nwere ike igwu gị kacha mma ohere mpere bonus saịtị e mepụtara site NetEnt. A na-ewu ewu ika aha na ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ na narị cha cha egwuregwu kere maka online ọrụ.
Na nke a na-akpa ọchị katuunu dabeere oghere egwuregwu, i nwere ike ịhụ ndị nnọchianya nke ezinụlọ ọbọgwụ. A nwoke azụmahịa nwoke ọbọgwụ, naghị arụ ọrụ ego ọbọgwụ, a teenaged ọbọgwụ na ya obere nwanne, a-eto eto ọbọgwụ. Egwu na-akpọ kaadị ke agbajikwa egg shells na-ala bara uru ihe atụ nke egwuregwu a na i nwere ike na na na kacha mma ohere mpere bonus saịtị. The nwoke ọbọgwụ akwụ n'elu na 400 ugboro ise nke ya ụdị na a payline. E nwere ihe abụọ bonus akara na egwuregwu na ha bụ ndị na-jọrọ njọ duckling na ọzọ bonus akara.
Wild daashi: The jọrọ njọ duckling akara bụ anụ atụmatụ nke egwuregwu a na ọ na-ekpuchi ihe niile ndị ọzọ. Mgbe ọ na-egosi na a na-emeri Nchikota, akara na-etolite a ogologo ma mara mma ọbọgwụ na-ekpuchi dum ukwu. N'ihi ya, i nwere ike na-atụ anya ndị nnukwu Enwee Mmeri na ihe ọhịa akara. N'oge free spins, anụ na-egosi dị ịgbasa ọhịa, mgbe ọhịa na colossal ọhịa nke nwere ike ikpuchi atọ dum na-esi anwụde.
Gbasaanụ Njirimara: E nwere a logo na Free spins kwuru na ya na ya bụ ikposa feature. Ugbu a na ị maara ihe ọ na-eme, mkpa ka ị mara otú ọ na-eme. Mgbe ị na-egwu a oghere gị kacha mma ohere mpere bonus saịtị, ị ga-achọpụta atọ ikposa akara Ị kpọghee ekwt ụfọdụ bonus atụmatụ. Ọ nwere ike na inwe onye ọ bụla n'ime ise atụmatụ na na-mejupụtara free spins isii na iri na ise.
Mgbe ị na-egwu egwuregwu a na kacha mma ohere mpere bonus saịtị, ị ga-fun tinyere dị iche iche bonus Enwee Mmeri.
fairytale Akụkọ Ifo: Hansel na Gretel